Tag: ụlọ nsọ
Mgbe ọ bụla ị hụrụ ụgwọ na-arụ ọrụ site na Senate na Congress nwere ihe karịrị ọkara ijeri dollar site na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-akwado ya, ị ga-elerukwu ya anya dị ka nwa amaala. Dị ka edere ya, CISPA agaghị echebe anyị pụọ na iyi egwu cyber, mana ọ ga-emebi mmebi iwu nke anọ nke nzuzo anyị. Ọ na-eme ka gọọmentị nledo gị na-enweghị akwụkwọ ikike. Ọ na - eme ya ka ịghara ịchọta
Theirrrrr baaaack… ma ọ bụrụ na enwere otu ihe nke gọọmentị na-ada ada, ọ na-emebi nwayọ nke ndị ha. Cyber ​​Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) bụ usoro ọzọ nke SOPA. O di nwute, ụgwọ a enweghi ikike nke onye obula, obu ezie. Ihe kpatara na ụfọdụ ụlọ ọrụ dịka Facebook nwere ike ile ụgwọ a na-enweghị mgbagha bụ na enwere ihe dị na ya maka ha. Dabere na Electron Frontier Foundation: Ndị a